Nuxurka Qodobada Shirkii Madasha
Jabriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa hay’adda CRD, kana mid ahaa xubnihii ururada bulshada rayidka ee ka qeyb galay shirka Madasha Wadatashiga Qaran ayaa faahfaahinaya qodobada ay xubnaha Madasha isku raaceen.
Shirkii Madasha Wadatashiga Qaran ayaa shalay magaalada Muqdisho lagu soo geba gebeeyey, waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ku saabsan waxyaabihii madasha ay isku raacday.
Natiijooyinka ka soo baxay shirka ayaa muujinaya in bilaha soo socda ayaa noqon doonaan kuwa saamayn ku yeelan doona mustaqbalka siyaasdeed ee dalka.
Qodabada la isku afgartay ayaa dhigaya in dib la isugu soo noqdo bartamaha bisha December kadib marka la soo ururiyo fikradaha ay dadweynuhu ka qabaan qaabka loo gali karo doorasho loona bedeli karo xukuumadda iyo baarlamaanka haatan talada haya.
Arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa, cidda yeelan doonta go’aanka kama dambaysta ah ee ku aaddan afkaarta ay dadweynuhu soo gudbiyaan.
Wareysi arrintaasi ku saabsan, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu la yeeshay Jabriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa hay’adda CRD, kana mid ahaa xubnihii ururada bulshada rayidka ee ka qeyb galay shirka, waxaana uu ka diyaariyey warbixintan.
Faahfaahinta Shirka Madasha
Brussels: Shir Looga Hadlayo Soomaaliya
Assad Iyo Putin Oo Ku Kulmay Moscow
Shirkii Madasha Oo Lasoo Gebogebeeyey
Wareysi: Hooyada Wiil lagu Dilay London